Rubber qaydhiin Waxyaabaha Goynta Machine - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Rubber qaydhiin Waxyaabaha Goynta Machine
Isticmaalka Product Description Rubber mashiinka wax cayriin goynta waa mid ka mid ah qalabka ugu used in alaabta ceeriin processing.It inta badan loo isticmaalaa in lagu gooyay caag dabiiciga ah, caag synthetic, iyo qalabka kale ee caag burburi, taas oo ka dhergin looga baahan yahay. Sidoo kale, waxaa haboon in lagu xiro meel u dhow fiicni caag ah waa. Qaab dhismeedka qoreysa Mashiinka goynta caag Tani waa qaab-dhismeedka fudud, design macquul ah iyo hawlgal ku haboon. Waxaa inta badan ka koobnaa jarida mindi, jir, dhululubo, tartanka of marmarin cayriin ...
Rubber mashiinka wax goynta xumu waa mid ka mid ah qalabka ugu used in alaabta ceeriin processing.It inta badan loo isticmaalaa in lagu gooyay caag dabiiciga ah, caag synthetic, iyo qalabka kale ee caag burburi, taas oo ka dhergin looga baahan yahay. Sidoo kale, waxaa haboon in lagu xiro meel u dhow fiicni caag ah waa.
Mashiinka goynta caag Tani waa qaab-dhismeedka fudud, design macquul ah iyo hawlgal ku haboon. Waxaa inta badan ka koobnaa mindi goynta, jir, dhululubo, tartanka of caag ceeriin iyo system.It Haydarooliga ansixiyeen gacanta ku biiyaha laga soo dagaayo inuu badbaadiyo tamarta.
The derin ilaalinta hogaanka la geliyo ka yar mindi goynta si ay u ilaaliyaan cidhifka goynta knife.When shaqeeya, geliyey caag ah cayriin ka yar mindi goynta iyo u googooyaa yar oo ku haboon qodan caag by lagu niinaaso ee dhululubo ee saliidda Haydarooliga.
cadaadiska dhululubo Oil (Kn)
waqti Rubber safarka goynta (S)
awood Motor (kw)
cabbir Guud (L W * H *)
Previous: Rubber Bale magaabay wiil Machine
Next: Filter Rubber strainer Extruder Machine
Double Rolls Rubber Jarida Machine
Dabiiciga Rubber magaabay wiil Machine
New Xaaladda Rubber dacas Machine Jarida
Filibiin Mashiinka goynta caag
Diyaarad Machine Jarida Rubber
Rubber Bale magaabay
Rubber Belt Jarida Machine
caag Mashiinka goynta block
caag Mashiinka goynta tuubada
Rubber qaydhiin Jarida Machine
Rubber dacas Machine Jarida
Saacado Belt Machine Jarida
Turos Makiinado Jarida
Jarida Turos dib loo Rubber Powder
Turos Shredder Rubber Jarida Machine
Ganacsiga Hubinta Rubber dacas Jarida Machine
Machine Jarida Turos
Xiinka Rubber Jarida Machine
Qashinka Turos Oo Rubber qaydhiin Waxyaabaha Machines Goynta
Qashinka Turos magaabay wiil Machine
Qashinka Machine Jarida Turos
Qashinka Turos magaabay
Wire Belt Jarida Machine
PVC caaga Fiber xoojiyeen tubbo tuuboyinka ext Tube ...
Nooca Horizontal Machine wax taaj oo kale duritaanka Rubber
Caaga Santoprene PVC TPE TPV Daboolayo Strip E ...